Eric Bailly oo doonaya inuu sii joogo kooxda Man United, balse hal arrin ka dalbaday macallin Jose Mourinho – Gool FM
Eric Bailly oo doonaya inuu sii joogo kooxda Man United, balse hal arrin ka dalbaday macallin Jose Mourinho
Byare May 24, 2018
(Manchester) 24 Maajo 2018. Eric Bailly ayaa la soo warinayaa inuu doonayo inuu sii joogo kooxdiisa Manchester United, laakiin waxa uu hal arrin ka dalbaday macallinka kooxdaas ee Jose Mourinho.
Shabakadda Manchester Evening News ayaa warinaysa in difaaca Manchester United ee Eric Bailly uusan wax dan ah ka lahayn ama uusan doonayn inuu kooxdiisa ka tago xagaagan.
Xiddiga xulka qaranka Ivory Coast ayaa mustaqbalkiisa kooxda shaki la galinayey bilihii dhawaa, kaddib markii uu ku guuldarreysatay inuu si joogto ugu ciyaaro kooxda xilli ciyaareedkan 2017-18.
Waxa uu kaliya ku soo bilowday labo kulan 10-kii kulan ee ugu dambeeyey xilli ciyaareedkan, sababtaas darteed ayaana la wariyey inuu suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan uu Bailly kooxda isaga tagi doono.
Laakiin haatan waxaa la sheegayaa in 24-sano jirkaan uu ku faraxsan yahay kooxda, balse waxa uu macallin Mourinho ka dalbaday hal arrin oo ah inuu u ogolaado inuu si joogto ah u ciyaaro xilli ciyaareedka soo socda ee 2018-19.
Bailly oo lagu doodi karo inuu yahay difaaca dhexe ee ugu wanaagsan kooxda Manchester United ayaa la warinayaa inuusan aqbali doonin inuu xilli ciyaareed kale u ciyaari waayo si joogto ah, tiiyoo ay jirto in kooxda Man Utd la la xiriirinayo dambeedka Tottenhan ee Toby Alderweireld.
Shirkadda Nike oo soo saartay Kabo cusub oo ay ugu talo gashay inay ciyaartoydu ku dheelaan Koobka Adduunka 2018… + SAWIRRO
Carlo Ancelotti oo doonaya inuu xiddigo ka kala tirsan kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Chelsea u kaxaysto Napoli